Shirka Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe ee Jowhar oo dib u dhacay - BBC News Somali
3 Sebtembar 2016
Image caption Shirka Jowhar
Waxaa dib u dhacay shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabellada Dhexe ee maanta ka furmi lahaa magaalada Jowhar.
Illo ku sugan magaalada Jowhar ayaa BBC-da u sheegay in ay socoto qabanqaabadu, ciidammada AMISOM oo aan markii hore ku sugnayn gudaha magaalada ayaa la wareegay sugidda ammaanka iyo goobta uu shirku ka dhicidoonaba.
Shirka ayay u muuqataa in uu dib ugu sii dhici doono Isniinta sida uu noo sheegay qof xog ogaal ah.
Balse, qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku sugan Beledweyne ayaa diidan in shirkaasi ay ka qeybgalaan.
Odayaashan waxay dalbanayaan in gobolka Hiiraan la kala qeybiyo oo laba gobol laga dhigo.
Ayadoo caqabadahaasi ay jiraan ayey dowladda iyo ururka IGAD waxay doonayaan in la furo shirka sida uu BBC-da u sheegay Maxamed Cabdi Afey oo ah wakiilka IGAD ee Soomaaliya.
"Odayaasha waxaan ka codsaneynaa in ay shirka ka qeybgalaan, hadeysan dooneynna cid ku qasbeysa ma jirto". Ayuu yiri Afey.
Wuxuu intaasi raaciyay in dhismaha maamulka ay dan ugu jirto dadka labadaasi gobol, ayna muhiim u tahay in ay ka qeybgalaan.
Waxaan uga digayaa beesha caalamka inaysan kharash ku bixin dhibaatada laga maleegayo Jowhar
Mid kamid ah odayaasha Hiiraan, nabadoon Faarax Raage Kooshin oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay diidan tahay in la dhageysto cabashada shacabka Hiiraan.
Dalabka odayaasha Hiiraan
in labo Gobol loo qeybiyo Hiiraan.
In Madasha Shirka loo soo weeciyo Magaalada Baladweyne
iyo in dib u heshiisiin loo sameeyo Beelaha wada dega Gobolkaasi Hiiraan
Waxaa kale oo uu sheegay in dowladda ay shaqsiyaad gaar ah ay u wado in ay maamulka u dhiibto.
Muranka ku saabsan maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabellada Dhexe ayaa muddo soo jiitameysay. Sanad ka hor ayaa lagu heshiiyay in la sameeyo maamul gobleed ay ku midaysanyihiin gobalada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe.
Waxaana horey u fashilmay in xal laga gaaro doodaasi hor taagan in la soo afjaro dhismaha maamulka ugu dambeeya ee federaalka Soomaaliya ka hor doorashada oo lagu wado in ay dhacdo September iyo October.